सुदर्शन–पुजा र सन्तोष–प्रदिप खेमामा अझै प्रतिस्पर्धा, नयाँ फिल्मको तयारीमा दुबै टिम ? -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
सुदर्शन–पुजा र सन्तोष–प्रदिप खेमामा अझै प्रतिस्पर्धा, नयाँ फिल्मको तयारीमा दुबै टिम ?
फिल्मी फण्डा । कोरोना भाइरस जोखिमका कारण तीन करोड बढि लगानी रहेको फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ को रिलिज अन्यौल बनेको छ । कोभिडको जोखिम कहिले हट्ने हो कुनै टुङ्गो छैन । हलहरु कहिले खुल्ने र कहिलेबाट दर्शकहरु फिल्म हलमा आउने हो कुनै टुङ्गो नलागेसम्म फिल्म रिलिज गर्न सकिने अवस्था छैन ।
लगानी गरेको फिल्महरु रोकिएको अवस्थामा पनि दुईवटा फरक ब्यानरले नयाँ फिल्मको घोषणा र टिमअप गर्दा आश्चर्य मान्न सकिन्छ । सुदर्शन थापा र पुजा शर्माले निर्माण गरेको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को रिलिज पनि रोकिएको छ ।
सोही बीचमा निर्देशक थापा र नायिका शर्माले अर्को फिल्म निर्माण गर्न लागिएको उद्घोष गरे । अहिले छायाँकनमा गईहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अर्कोतर्फ लगानी फसेको फिल्म स्थिर अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ फिल्म घोषणा गर्नु पब्लिसिटी स्टन्ट मात्र रहेको धेरैको बुझाई छ ।
सुदर्शन थापा र पुजा शर्माले फिल्म घोषणा गरेर नायकको खोजी गरिने जानकारी गराएको केही दिनमा यता निर्माता सन्तोष सेन र नायक प्रदिप खड्काले नयाँ फिल्मको लागि टिमअप शुरु गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार फिल्म ‘प्रेमगीत २’ कै टिमलाई दोहोर्याएर नयाँ फिल्मको तयारीमा सन्तोष सेन जुटेको बुझिएको हो ।
फिल्म ‘प्रेमगीत’ बाट नै निर्देशक सुदर्शन थापा र नायिका पुजा शर्माको एउटा क्याम्प बनेको थियो भने निर्माता सन्तोष सेन र नायक प्रदिप खड्काको अर्को क्याम्प बनेको थियो । बाहिरी रुपमा यी दुई टिमबीच खासै विवाद नदेखिएपनि आन्तरिक र भित्री रुपमा इगो रहेको चर्चा चल्दै आएको छ ।
अहिले सुदर्शन थापा र पुजा शर्माको नयाँ फिल्म घोषणा लगतै सन्तोष सेन र प्रदिप खड्का पनि नयाँ फिल्मको टिमअपमा लागेको देख्दा यी दुई क्याम्पबीच अझै इगो रहेको र भित्री प्रतिस्पर्धा रहेको प्रष्ट हुन्छ । तर अहिले फिल्म घोषणा गर्नुको कुनै तुक भने रहँदैन ।
अहिलेको अवस्था रिलिज अन्यौल भएको फिल्म कसरी रिलिज गर्ने भने पहिलो विषय हो । पब्लिसिटी स्टन्ट र इगोईजमका कारण प्रस्पिर्धामा अनावश्यक माहोलमा पनि फिल्म घोषणा हुदाँ अन्य फिल्मकर्मीहरु भने आश्चर्यमा परेका छन् ।